Reach7: Shingairira Vazhinji Vateereri paSocial Media | Martech Zone
Reach7: Shingairira Vazhinji Vateereri paSocial Media
China, Kukadzi 25, 2016 Chishanu, February 26, 2016 Douglas Karr
Svitsa7 inoda kuita kuti zvive nyore kune vanhu uye mabhizinesi kuti vawedzere kusangana kwavo munharaunda pasirese. NaReach7, vashandisi vanoona uye vanobatana nevateereri vanonyanya kukoshesa pasocial media zviri nyore uye zvine mutsindo.
Chikuva chavo chinobatsira vashandisi kuvaka vateereri vanokodzera mumusika wavo wemuno kana kushanda nemazvo kuti vaite nemusika wepasirese. Mabhizimusi kana vanhu vega vanogona kuisa tweets mune anopfuura makumi masere emitauro inonyanya kutaurwa pasi rose. 80% yeshanduro dzakapedzwa mukati meawa, kazhinji mukati memaminetsi.
Kuwedzera Reach7 Zvimiro
Kukura Kwevateereri - Kukura kuburikidza nekuita kwakanangana. Ziva vanhu uye zvemukati zvekutevera, senge uye ugovana.
Kufanirwa chinzvimbo - Chengetedza nguva neyedu yakasarudzika inoenderana iyo inowana iwe mhinduro dzakanakisa.
Edza Kubudirira - Humbowo huri mupudding. Tora zuva nezuva, masvomhu evhiki nevhiki ekuti kubatana kwako kuri kukonzera vateveri vatsva
Localize Twitter - Svikira misika inodarika makumi masere + nemisika isina musono yemagariro edudziro yakavakirwa mukati.
Chikamu Chevateereri - Chikamu chevateereri vako chakanangana nemishandirapamwe kuitira kuti ugone kutarisa kumapoka akasiyana nemazuva akasiyana.
tsvakurudzo - Tarisa uone yakazara yakazara tsoka yepamhepo yevakakodzera vanhu senge yavo LinkedIn, blog, Pinterest nezvimwe.
Edza Reach7 Yemahara
Reach7 zvakare ineHootsuite Plugin, kuti iwe ugone kuishandisa zvakananga kubva kune yakoHootsuite dashboard kuronga uye kuburitsa maTweets.
Reach7 inopa matatu marongero:
Iyo Starter chirongwa, chemahara sevhisi yakakwana kune vanhu vanoda kuwedzera yavo yemagariro midhiya kubatanidzwa.
Zano rakazara, $ 19.99 / mwedzi, rakanakira mabhizinesi, e-commerce makambani, uye madhipatimendi ekutengesa anoda kusangana nevateereri vakatarisana pasocial media.
Chekupedzisira, chirongwa chePro pa $ 59.99 / mwedzi chakanakira mabhizinesi ane akawanda mushandisi zvikamu mumusika unopfuura mumwe chete, pamwe nevatori pamwe nemasangano madiki.
Reach7 ine vatengi vanopfuura zviuru zvishanu, nhamba inokura zuva rega rega uye inosanganisira makambani senge Worldpay, Re / Max, Sharp, uye Viking Direct.
Tags: hootsuite pluginkushandurwa kwevanhukudyidzana kwenyikamitauro yakawandaMultilingualkusvika7evanhu vezvenhaukubatana kwenhaushanduroTweetTwittertwitter localization
Hotjar: Heatmaps, Funnels, Recordings, Analytics uye Mhinduro